किन कुञ्जी शब्द श्रेणीकरण कहिल्यै तपाइँको प्राथमिक प्रदर्शन मेट्रिक हुनु हुँदैन Martech Zone
किन कुञ्जी शब्द र्या Ran्कि Never तपाईको प्राथमिक प्रदर्शन मेट्रिक हुनु हुँदैन
शनिबार, जुलाई २१, २०१। शनिबार, जुलाई २१, २०१। बिल अचोला
धेरै लामो समय सम्म, एसईओ रणनीतिहरू मुख्य रूपमा कुञ्जीशब्दहरूमा रैंकिंग हुने समावेश गर्दछ। कुञ्जीशब्दहरू एक अभियानको प्रदर्शन मापन गर्न प्राथमिक कारक थिए। वेबसाइट निर्माणकर्ताहरूले साइटहरूमा कुञ्जी शब्दहरूको साथ सामग्री राख्दछ, र ग्राहकहरूले परिणामहरू हेर्न मन पराउँछन्। नतिजा, तथापि, एक फरक चित्र देखाए।
यदि तपाइँको SEO ट्यूटोरियल शुरुवातकर्ताहरूको लागि Google उपकरणहरू प्रयोग गरेर कुञ्जीशब्दहरू पत्ता लगाउन समावेश गर्दछ र त्यसपछि वेबसाइटमा तिनीहरूलाई राखेर, यो सहि दिशामा जाँदैछ, तर केही हदसम्म। एसईओको लागि वर्तमान परिदृश्यमा, कुञ्जी शब्दहरू धेरै मेट्रिक्स मध्ये एक हुन् जुन तपाईंको वेबसाइटको राम्रो श्रेणीकरणमा अग्रणी छ।
सुरुमा, मेरो ब्लग आफैँलाई एसईओ गर्न प्रयासमा, मैले पनि त्यस्तै गरें, खोजशब्द भरपूर। र त्यो केवल गल्ती थिएन जुन मैले गरेको मेरो नेतृत्व थियो SEO अभियान बेकार हुन। अब पर्याप्त अनुसन्धान गरिसके पछि मसँग पर्याप्त ज्ञान छ तपाईंसँग मेरो अंतर्दृष्टि सबैलाई साझेदारी गर्नुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो एसईओको साथ अघि बढ्नु अघि तपाईं सबै महत्त्वपूर्ण बुँदाको ख्याल राख्नुहुन्छ।
कुञ्जी शब्दहरुमा अगाडि बढ्नु भन्दा पहिले हामी गुगल खोजीले कसरी काम गर्छौं, त्यसमा थप जान दिनुहोस्। विगतमा जस्तो जस्तो छैन SERPS मा उच्च रैंकिंग किवर्ड वा कुञ्जी वाक्यांशहरूको प्रयोगको कारणले हुन सक्छ, अब, गुगलले कुञ्जी शब्दहरूलाई दर्जा दिदैन। गुगलले यसको सट्टा जवाफको आधारमा परिणामहरू राख्दछ, अर्थात् कुन जानकारी निकाल्नको लागि प्रयोगकर्ताले चाहेको थियो। खोजमा कुञ्जी शब्दहरूको प्रासंगिकता खण्डन थालेको छ किनभने किवर्डहरूले केवल शब्दहरूमा जोड दिए जुन प्रयोगकर्ताहरूले इनपुट गर्दछन्, उनीहरू के होइनन् चाहन्थे.
गुगल तपाईंलाई उत्तरहरू प्रदान गर्न कोशिस गर्दैछ जुन तपाईं चाहानुहुन्छ। जसको मतलब पृष्ठ अझै पनी हुन सक्छ उच्च श्रेणी खोज सर्तको बावजुद मेटा विवरणमा वा पृष्ठमा सबै उपस्थित छैन। तल एउटा उदाहरण छ।
तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि कसरी शीर्ष नतीजाहरूमा कुञ्जी वाक्यांशमा आधा शब्द हुँदैन। त्यस्तै, शीर्ष परिणामको वेबपृष्ठमा, शब्द “वर्षा " पनी अवस्थित छैन। यसले कसरी भन्छ प्रासंगिकता नतिजाहरुको Google लाई अधिक महत्व राख्छ केवल कुञ्जी शब्दहरु भन्दा।
यसले हामीलाई यो विन्दुमा पनि पुर्‍याउँछ कि कडा खोजशब्द वर्गीकरणले आजको एसईओ रणनीतिहरूको केही अर्थ राख्दैन। कुञ्जी शब्द श्रेणीकरण रूपान्तरणको प्रक्रियाको एक भाग मात्र हो। यहाँ कसरी छ गुगलले यो तिनीहरूको ब्लगमा वर्णन गर्दछ:
त्यसकारण, तपाईंले कुञ्जी शब्द श्रेणीकरणमा जानुभन्दा पहिले तपाईंको वेबसाइट अनुक्रमणिका र क्रल हुन योग्य हुनुपर्दछ। तपाईंको साइट क्रमबद्ध पछि पनि, यो खोज पछाडि प्रयोगकर्ताको उद्देश्य पूरा गर्न र तपाईंको व्यापारको लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। (उदाहरण डाउनलोड, ईमेल सदस्यता, आदि)
राजस्व र नाफा एक्लै छोड्नुहोस्; कडा कुञ्जी शव्दको मतलब तपाईसँग हुदैन जैविक यातायात को उच्च मात्रा, ब्लगमा पहिले र पछिको उल्लेखित कारणहरूलाई ध्यानमा राख्दै, यो भन्न गाह्रो छ कि तपाईंको वेबसाइटमा कुञ्जी शब्दले कति आकर्षित गर्छ। जे होस् र्याक परीक्षकले अनुकूल नतिजा देखाए पनि तपाई तथ्यका बारे सचेत हुनुपर्दछ कि तपाईंले खोजिरहनु भएको कुञ्जी शब्दहरूको डाटा पूर्ण रूपमा सहि छैन। यसको कारण वर्णन गर्नका लागि, म उत्तर दिनको लागि एक शब्द मात्र लिन सक्छु, निजीकरण.
मलाई तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ कि कसरी निजीकरणले खोज परिणामलाई प्रभाव पार्दछ र खोजी परिणामहरूमा रैंकिंगमा कुञ्जी शब्दहरूको सान्दर्भिकतामाथि विजय पाउनको लागि खोजी परिणामहरू।
गुगलसँग हाम्रा धेरै जानकारीहरू छन्, साथै हाम्रो खोज ईतिहास, हाम्रो स्थान, डेमोग्राफिक्स, उपकरण जुन हामीले प्रयोग गरिरह्यौं वा हामी प्राय जसो प्रयोग गर्छौं, हाम्रो ब्राउजि the व्यवहार, स्थानहरू जुन हामी प्राय जसो विशाल छौं र अन्य प्लेटफर्ममा अन्य गतिविधि धेरै। यूट्यूबको रूपमा।
उदाहरण को लागी, यदि मैले खोजी गरे भने न्यु जर्सीमा स्वास्थ्य केन्द्रमेरो गुगलमा शीर्ष नतिजाले जिमको वेबसाइट देखाउँदछ जुन मैले पहिले पनि भ्रमण गरिसकें।
त्यस्तै गरी, यदि मैले बिहान ११ बजे नेवार्क शहरमा रेष्टुरेन्टहरू खोज्छु भने गुगलले यसलाई कारमा एक व्यक्तिको रूपमा देख्दछु खाजा खानु रेस्टुरेन्ट खोज्न।
तसर्थ, परिणामहरू फिल्टर गर्न, Google ले खुला रेस्टुरेन्टहरू, खाजा सेवा दिदै, र शीर्ष परिणामहरूको रूपमा मेरो हालको स्थानको ड्राइभि driving दायरा भित्र छन्।
यी केवल दुई उदाहरणहरू छन्; त्यहाँ अन्य धेरै कुरा छन् कि Google कसरी खोजशब्द रैंकिंग प्रयोग गर्दैन, परिणाम श्रेणीकरण गर्न।
मोबाइलमा खोजी गर्दा डेस्कटपमा खोजी गर्दा फरक परिणामहरू कोर्दछ। त्यस्तै गुगल आवाज गुगलले अब नतिजाहरूको तुलनामा बिभिन्न परिणामहरू कोर्दछ। शीर्ष परिणामहरू पनि परिवर्तन हुन्छ यदि तपाईं यसको इनकग्निटो मोडमा ब्राउजर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने।
त्यस्तै, उत्तरी क्यालिफोर्नियामा प्रविष्ट गरिएको उही खोजी शब्दले दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा प्रविष्ट गरेको भएमा फरक नतिजा ल्याउनेछ।
यो भए पनि, यदि तपाईं र म एक अर्काको साथ उभिरहेका छौं भने, हाम्रो खोज परिणाम अझै फरक देखिन्छ। यो कारण माथि मा भनिएको हो, अर्थात, निजीकरण हो।
मैले सुरूमा गरेझैं तपाईले आफ्नो अभियानको प्रभावकारिता पनि जाँच्न सक्नुहुन्छ प्रासंगिक कुञ्जीशब्दहरूको खोजी गरेर र त्यसपछि यदि तपाईले हेरिरहनुभयो भने पहिलो पृष्ठमा श्रेणी.
त्यसोभए तपाईं रिपोर्टमा फर्केर जानुहुन्छ कि तपाईको लक्षित कुञ्जी शब्दहरूका लागि औसत दर्जा के छ भनेर हेर्न।
हामीले माथि हेर्‍यौं कि कसरी कीवर्डहरू तपाईंको व्यवसायको अनलाइन सफलताको न्याय गर्नको लागि सान्दर्भिक मेट्रिक छैनन्। त्यसोभए हामी हाम्रो एसईओ रणनीतिलाई अलग बनाउन के गर्न सक्छौं?
प्रासंगिक स्तर उच्चतम
आजको एसईओ रणनीति प्रयोग लामो पुच्छर कुञ्जी शव्दहरू। किन? तिनीहरूले तपाईंको पृष्ठ खोजी ईन्जिनसँग बढी सान्दर्भिक देखिन्छ त्यसैले यसलाई सही स्थानहरूमा सही व्यक्तिहरूको लागि उच्च स्थान दिइन्छ।
तपाईंको वेबसाइट कुञ्जी शब्द श्रेणीकरणले फरक पार्दैन, किनकि त्यहाँ विभिन्न तरिकाहरू छन् जसमा मानिसहरूले खोजी गर्दछन्। साथै, गुगलले परिणामहरू उनीहरूको ईतिहास, स्थान, उपकरण, इत्यादिमा आधारित देखाउँदछ।
तपाईले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि जैविक खोजी मार्फत तपाईको पृष्ठमा आएका आगन्तुकहरूको संख्या प्रत्येक दिन, हरेक महिना र हरेक बर्ष बढ्दैछ। तपाईंले यो पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ कि आगन्तुकहरू र नयाँ आगन्तुकहरू तपाईंको लक्षित बजार भित्रबाट आएका छन्।
जैविक खोजीको माध्यमबाट आएका आगन्तुकहरुबाट तपाईले अधिक रूपान्तरणको अपेक्षा गर्नु पर्छ।
रूपान्तरण मापन गर्नुहोस्
ध्यानमा राख्नुहोस् कि तपाईंको खोज अनुभवले तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूको खोजी परिणामहरू प्रतिबिम्बित गर्दैन। यो कारण यो हो कि यो तपाइँको एसईओ अभियान को सफलता को सूचक होईन न त यो तपाइँको वेबसाइट मा अधिक रूपान्तरण प्राप्त हुनेछ बताउँछ।
परिणामहरूमा फोकस गर्नुहोस्, तपाईंको उद्देश्य भनेको तपाईंको फोनको घण्टी बजाउनु, सम्पर्क फारामहरूसहित मेलहरू प्राप्त गर्दै, वा तपाईंको अर्डर ट्याब नयाँ अर्डरहरू देखाउनको लागि हो।
त्यसोभए तपाईं मात्र आफ्नो अभियानलाई सफलको रूपमा घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पुग्न सजिलो छैन। तपाईंको अभियान निर्माण गर्न र आफ्नै एसईओ खेल बढावा दिन एक विशेषज्ञको मद्दत माग्न नहिचकिचाउनुहोस्।
टैग: कुञ्जी शब्द श्रेणीकुञ्जी शब्द श्रेणीकरणलामो पुच्छर कुञ्जी शव्दहरूजैविक वृद्धिजैविक खोज सर्पप्रासंगिकताएसईओ
बिल अचोला एक अग्रणी डिजिटल मार्केटर हो जसले निरन्तर अनमोल मूल्यवान सामग्री पम्प गर्दछ जुन तपाई जस्तो व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय विकास गर्न प्रयोग गर्न सक्छ, यो लेख जस्तै। मा उसको व्यवसाय ब्लग जाँच गर्नुहोस् Billacholla.com
मार्केटर, सेल्सपिपल र सीईओ (डाटा + सल्लाह) को मार्केटिंग स्वचालन चुनौती
कल-टु-एक्शनको Most सबैभन्दा सामान्य प्रकारहरू के हुन्?